ရွှေအိမ်စည်တစ်ယောက် ဘာအတွက် ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတာလဲ?
ပဟေဠိဆန်ဆန် ပရိသတ်ကို အချစ်စမ်းလိုက်တဲ့ အိမ်စည်
20 Mar 2018 . 5:24 PM
လတ်တလောမှာ ကြော်ငြာတွေ ကို ဆက်တိုက်လိုလို ရိုက်ကူးနေတဲ့မော်ဒယ်ရွှေအိမ်စည် တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပုံ တချို့တင်ထားပြီး ဘာရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ပုံတွေ နဲ့အတူ ပူးတွဲပြီး အခုလိုတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Photo Credit- Shwe EainSi ‘s Facebook
“ဒီနေ့ တစ်နေ့ကုန် ကုန်းလိုက်ကွလိုက်, ကျော်လိုက်ခွလိုက်, ဒိုက်ထိုးလိုက်, ဝမ်းလျားမှောက် သွားလိုက်နှင့် ကြားထဲနေကပူ … လူကအိပ်ရေးကမဝထား မျက်နှာဇီးရွက်လောက်ပဲကျန်တယ်ဒါပေမဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ကဒ်တွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါ အရမ်း စိတ်ချမ်းသာရလို့ ပင်ပန်းတာတွေတောင် ဘယ်ရောက်သွားမလဲမသိဘူး။
ကိုယ်တကယ် စိတ်ပါလက်ပါနှင့် လက်ခံထားတဲ့အလုပ်မို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားတယ်၊ အရမ်းလည်း အပင်ပန်းလည်းခံထားတယ် ဘာအတွက်ရိုက်တာလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်ကြနော် “ ဆိုပြီးတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေအိမ်စည် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဟဲလေးရဲ့ မှည့် MTV သီချင်းဟာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း မှာထွက်ရှိထားပါသေးတယ်။
ပဟဠေိဆနျဆနျ ပရိသတျကို အခဈြစမျးလိုကျတဲ့ အိမျစညျ
လတျတလောမှာ ကွျောငွာတှေ ကို ဆကျတိုကျလိုလို ရိုကျကူးနတေဲ့မျောဒယျရှအေိမျစညျ တဈယောကျ သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာ ပုံ တခြို့တငျထားပွီး ဘာရိုကျကူးရေးလုပျနတောလဲ ဆိုတဲ့မေးခှနျးကို ပုံတှေ နဲ့အတူ ပူးတှဲပွီး အခုလိုတငျထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
“ဒီနေ့ တဈနကေု့နျ ကုနျးလိုကျကှလိုကျ, ကြျောလိုကျခှလိုကျ, ဒိုကျထိုးလိုကျ, ဝမျးလြားမှောကျ သှားလိုကျနှငျ့ ကွားထဲနကေပူ … လူကအိပျရေးကမဝထား မကျြနှာဇီးရှကျလောကျပဲကနျြတယျဒါပမေဲ့ ရိုကျထားတဲ့ကဒျတှပွေနျကွညျ့တဲ့အခါ အရမျး စိတျခမျြးသာရလို့ ပငျပနျးတာတှတေောငျ ဘယျရောကျသှားမလဲမသိဘူး။
ကိုယျတကယျ စိတျပါလကျပါနှငျ့ လကျခံထားတဲ့အလုပျမို့ အကောငျးဆုံး ဖွဈအောငျကွိုးစားထားတယျ၊ အရမျးလညျး အပငျပနျးလညျးခံထားတယျ ဘာအတှကျရိုကျတာလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးကွညျ့ကွနျော “ ဆိုပွီးတငျထားတာဖွဈပါတယျ။
ရှအေိမျစညျ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ဟဲလေးရဲ့ မှညျ့ MTV သီခငျြးဟာလညျး ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျး မှာထှကျရှိထားပါသေးတယျ။